"Kuverenga kunofanirwa kuve chimiro chemufaro." | Zvazvino Zvinyorwa
"Kuverenga kunofanirwa kuve chimiro chemufaro."
M. Scabies | | Literature
Borges kuratidzwa panguva iyi hurukuro, nguva refu ndisati ndazvarwa, chiratidzo chakakwanisa kuvhura maziso angu. Ini ndakanzwisisa, nekuda kwemashoko ehunyanzvi hweArgentina, kuti panguva yerwendo rwangu yekuve nyanzvi yekunyora anga arasa pfungwa. Zvandinoreva neizvi? Zvakanaka, anga aita kuverenga (uye nekuwedzera kunyora) chisungo, a basa. Pamwe yakanaka, uye imwe yandaida kuita, asi ini ndinoshanda mushure mezvose. Kana ndikaiverenga kwaive kuvandudza, kudzidza kuvaka mavara anonakidza nezvirongwa, kuwana zvinyorwa zvewongororo dzangu, kunyudza zvinyorwa zvakanaka, kana kudzivirira kuita zvikanganiso zvezvakaipa. Asi ini ndanga ndakanganwa chakakosha chinhu, chikonzero nei, semwana, ini ndakatanga kuverenga: nekuti zvakandifadza.
Kufadza hakusi kwekumanikidza
«Ini ndinofunga kuti chirevo chinoda kuverenga kupokana, kuverenga hakufanirwe kuve kwekumanikidza. Tinofanira here kutaura nezvekusungirwa mafaro? Sei? Kunakidzwa hakusi kwekumanikidza, kunakirwa chinhu chinotsvakwa. Zvinotenderwa mufaro? Isu tinotsvaga mufaro. »
Dambudziko kune vedu isu takazvipira kumabhuku nderekuti muganho uripakati pebasa redu nekuzvivaraidza wakanaka kwazvo. Ini, zvinyorwa ndizvo zvandinofarira, asiwo basa rangu (sezvakambotaurwa nemunyori wechiJapan Nisio Isin), ndosaka ndichizvitora zvakanyanya. Kusvika padanho rekuti (ikozvino ndazviziva), ndakazvimanikidza kuverenga mabhuku, uye kunyora nezvezvimwe zvidzidzo, nekuda kwekuti, pamwe padanho rekuziva, ndakafunga kuti vaverengi, nyika, uye pakupedzisira nzanga vaitarisira izvo munyori. Uye nenzira iyi, zvese zvaitamba, zvinonakidza, muchidimbu, zvepedyo, zvinofadza uye zvinonakidza mumabhuku zvaifaya zvishoma nezvishoma mukati mangu.
Vamwe vedu takarerwa kuti tifunge kuti basa rinofanira kunge rinofinha, uye kuti pane chimwe chinhu chisingafadzi uye chinosemesa nezvekufadzwa nazvo. Pamwe ichi ndicho chikonzero nei, kana zvasvika pakuverenga nekunyora, ini ndakazvikuvadza. Uye chii chandakawana pane izvi zvese? Kuverenga kusina kundifadza, kutambisa nguva, kutsvaga kusingabatsiri kuzadzisa zvinotarisirwa nevamwe. Ndanzwisisa, mushure mekufunga kukuru, izvo munyori-muverengi (Zvakanaka, ini handikwanise kubata imwe pasina imwe) inogona chete kuzadzikiswa kuburikidza neinenge hedonistic kutsvaga kwemufaro. Kuti iye anofanira kuverenga mabhuku aanoda kuverenga, uye kunyora nezve izvo zvaari kuda kunyora, nekugona kwake, kuti asanzwe kuti hunyanzvi hwake, basa rake, uye hupenyu hwake, zvinonyura sei mune zvisina musoro zvisina musoro.
Tinoverenga kuti tifare
«Kana bhuku rakakusvira, riise pasi, usariverenge nekuti rine mukurumbira, usaverenga bhuku nekuti nderechizvino-zvino, usaverenge bhuku nekuti nderechinyakare. Kana bhuku richinetesa iwe, siya iro… iro bhuku harina kunyorerwa iwe. Kuverenga kunofanirwa kuve chimiro chemufaro. "
Pakupedzisira, ndinofunga kuti iyi nyaya yese yakapfupikiswa mune nyaya yezvinokosha uye nguva, nekuti tese tichafa rimwe zuva. Kunyangwe kubva pachirevo ichi chakakosha hatifanire kutora chero meseji yehusiku. Kusiyana: isu tinofanirwa kuziva kuti hupenyu hupfupi, kuti makore anouya nekuenda, uye kuti hazvina musoro kubatirira pakuonekwa kusina maturo. Kune rangu divi, ini handidi kutarisa kumashure ndodemba zvakapfuura. Nhasi Ini ndinotevera huchenjeri hwakachena, mufaro wehucheche wekutsvaga nyika nyowani mukuverenga, mufaro usingaenzanisike wekugadzira nyaya dzangu. Izvo, kwandiri, zvinyorwa. Icho, kwandiri, ndihwo hupenyu.
Nekudaro, idzi ndidzo mhedziso dzangu, idzo zvirokwazvo hadzifanirwe kubvumirana nedzako. Ini ndakundikana mukuyedza kwangu kuzvibata zvine musoro, zvine mutsigo, uye nevakuru; kushandura basa rangu semunyori kuti rive iro revashandi vehurumende kana mabharani. Ini ndinongofara chete kana ndikateerera kumoyo wangu, uye moyo wangu unotaurira pfungwa dzangu kuti zvakaipa. Saka, kamwechete, ini ndichamuteerera. Ini handidi kushanda semuenzaniso, kana kukurudzira kuti iwe utevere mumakwara emuroti uyu asina kukura uye asingachinjike; Asi ndibvumire kuzvitutumadza kuti ndikurudzire kwauri, iwe uri muverengi, uye kwauri, iwe unogona kunge uri munyori, kuti urangarire mazwi aBorges: "Kuverenga kunofanirwa kuve chimiro chemufaro".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » "Kuverenga kunofanirwa kuve chimiro chemufaro."
7 yekunyora nhau dzemhando dzese dzemwedzi waChikumi
Lope De Vega, nei "El fénix de los ingenios"?